Njani ukufumana acquainted kunye kubekho inkqubela - phrases, iincam, efihlakeleyo ye-technique - IVIDIYO INCOKO-Uthando-intanethi!
Njani ukufumana acquainted kunye kubekho inkqubela - phrases, iincam, efihlakeleyo ye-technique
Kuqala zama ukuba abe polite kwaye yenkcubeko
I-familiarity zenza inxalenye Njani ukufumana acquainted nge kubekho inkqubela kwaye akazange yaphula ekuqaleni
Ewe kwayo nje kuthatha kancinci ixesha, lincinane, kwaye perseverance ngamnye imbono iya kuba ndabona.
Ndiya kwenza kuwe kum. Nangona oku, njenge, kwaye kungenxa yakho engundoqo msebenzi, kodwa kufuneka bazi ukuba wena. Kule meko kwi-girls kufuneka bazive, ubushushu novuyo communion. Kodwa le asiyiyo yakho obsessive umnqweno kwaye phulo kukwenza. I kubekho inkqubela kufuneka wena uluvo lwam, ke ngoko, zama ubuchule ukutsala ingqalelo. Awuyidingi behaviors ukuba abe extravagant, nje betha kuye emehlweni kwaye yenza uyabona ke kwi nani. Umzekelo: ukuchwetheza café, uyakwazi kukhuseleka kwaye respectful ukuthi molo ukuba i-umlawuli. Hlala phantsi, kwaye sasivuya rhoqo kakuhle kwi imboniselo kwi-umbindi we-igumbi, njalo-njalo, uyakwazi ukuchitha amaxesha aliqela kwi-phambili girls, abathanda kuwe. Ukuba ufuna kuhlangana phezulu kunye elonyuliweyo e ucango, yenza ubungqina boko.
Eneneni, phezulu ukuya oku, njani ukuqala intlanganiso kunye kubekho inkqubela iimfuno ukubonisa yakhe gallantry.
Ngamanye amaxesha ayi ukuba amazwi nika ezakho shyness kwaye uncertainty, ezifana facial yenza ingxenye yesakhelo kwaye gestures. I-posture kufuneka zibe mpuluswa, zayo shoulders. Zama ukunqanda ezi imiqondiso nervous, njengoko imilebe, ngokunqakraza amathambo ye-fingers, nervous movements ye-izikhali, njalo-njalo, Nani wazi njani ukufumana acquainted nge kubekho inkqubela, nkqu ukuba ongazange kwenzeka, nje qinisekisa ukuba le meko uyakwazi ukuphinda, njenge kwi-vidiyo umdlalo yonke into iza kuba lula kakhulu. Oku isiseko isiseko sedata kuqala na ulwazi (ngaphandle kwe-Intanethi).
Khangela emehlweni, zama babambisa i-lingqina.
Discreetly ncuma kwaye bonisa wakhe ukuba yena umdla kuwe. Akukho mfuneko linda, kude kube yima"umntu"okanye uza"umatshini"musa ukulibazisa. Abafazi musa njenge ukulinda, kude kube guy lugqiba ukuba imisebenzi yokuqala embalwa izivakalisi. A ukulinda ixesha kuphela ukutshintsha yakhe uluvo kuwe kuba eyona imbi. Ke ngoko, msinyane isaziso i-jikeleziso kwi-visual isicwangciso uyaya kwi attack. Nawuphi na kunjalo, musa qala ku-kuba amahlwempu buffoon, abo ngokwayo kwi-ingqondo kunye ubunzima kuvumela yacinga, ukuba oku kuya kuwa emva kwi kuye ingqalelo. Musa kuba besoyika, nkqu ye-ebukeka kwaye uzive ladies kufuneka ube kunye nabo ngexesha elinye umphakamo, ngenxa yokuba ingaba a guy.
Mundane umthetho, ukuba kufuneka kuba ngomhla wakhe icala, omelele kwaye babenenkalipho umntu, kubalulekile kule meko kunokuba ngonaphakade.
Ndifuna zolile nawe phantsi, ukuba bambalwa kakhulu abantu kuba yendalo charm kwaye i-incredible sociability. Kodwa yokugqibela, ngokungafaniyo yokuqala, uyakwazi ukuthenga kubo kwi-kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo yoqeqesho. Ewe-ewe, kufuneka kubalulekile ukwenza nokusebenzisa nzima kwaye ngaphaya koko, intsholongwane. Ndinazo ezinye okulungileyo exercises, ukuba uya thetha nawe. Kwaye lo incoko ukuba uza kukunceda kuhlangana girls. Ngoko ke: Nani ngokucacileyo ukhethe umdla kuwe umxholo. Le into, into usebenzisa ngaphezulu okanye ngaphantsi kakhulu ukuba waba olukhulu inzala. Kuthi ngayo kunye passers-yi-girls. Nje ukufumana kukufutshane ukuba kuye kwaye uqalisa zibalisa, yenzelwe.
Uthetha nge enthusiasm, admiration siya phezulu emotions.
Musa nakekela, baya kuba surprised, ubhideke, wajonga e njengoko i-anomaly. Yakho msebenzi wenziwe vala amehlo am uze uzame ukuba zonke kuba nge umntu incoko. Kunjalo, ukuba alifumanisanga eqale ukuba khumbula ukuba iquke beseli. Emva koko, njengokuba ufunda kubalulekile kunye abantu ababini, uyakwazi ukuqwalasela msebenzi nokwenziwa. Kweli xesha kufuneka senze girls zabo. I-sentloko kuni hayi politely cela into, funda ukuya kuxelela umdla, ukungenela incoko. Yiloo nto kufuneka ukhethe umxholo, nto leyo ichaphazela uya kunika kuba ubomi ukuba aba ngabo imiba kwi-imbambano kwi-budlelwane amadoda nabafazi.
Ingaba, kuba yena ndikulo uqhagamshelane kunye nawe, okanye nkqu argued.
Phambi kwenu ukuba realization ezi imisebenzi, ukuhlola imisebenzi yakho.
Ukuba ufaka absolutely hayi sociable umntu, ukuthi, nkqu ukuba wakhe izihlobo ezilungileyo kuqala ukuba idilesi le ngxaki. Ukuqeqesha ngokwakho ukuba abahlobo kunye acquaintances, kwaye ngoko hamba a uqeqesho lwenkqubo kwi-girls. Kukho indlela, kanjalo mnandi ukuhlangabezana a kubekho inkqubela, balwe ngokupheleleyo kwaye ngoko nangoko handing kuye okanye yakhe a pink nje downright. Kuyinto ebalulekileyo indlela ukufumana kwakhe ukumisa, zoba kwi ngokwakho i-ingqalelo kwaye ukuqala incoko kunye nawe. Kodwa ndiza ezingayi ukuyifihla, ukuba oku indlela ubani drawback: ukuba ufuna ukuhamba kwi-street kunye pink kuthetha, nisolko ikhangela kum"idini". Kwaye bakholelwe kum, young girls ingaba kulungile ngobukho lonto.
Ngoko ke uyakwazi ngokulula fumana indawo kufutshane flower kiosk kwaye kuthenga i-yenyuka kuba elonyuliweyo.
Kuyenzeka ukuba senze, ukuba ulinde ibhasi kufutshane yima kukho a flower-shop.
Nje abayo non verbal uqhagamshelane, emva koko kwi-store, kwaye kuza ngaphandle apho kunye iintyatyambo.
Kodwa umthetho ngokukhawuleza ukuze kubekho inkqubela alifumanisanga kokuba ixesha bemkile. Kuluntu lwethu, iselwa eqhelekileyo waqwalasela yokusiza kuba uncedo. Ndithetha, buza ukuba chaza indawo, ixesha, okanye indawo i-object. Uyakwazi ukuyisebenzisa wakho, oko kuya:"Umxelele, nceda, liphi na indawo esembinbdini yevili ezinjalo into, ukuba Ndine into lulahlekile. Sele park yakhe car kwaye ngoku mna akukwazeki ukufumana kuyo". Kodwa unako na cela into horrible. Kufuneka aqonde, apho lelona rhoqo sele idlule kwi abantu beli street kwaye ucele kubekho inkqubela kwindawo kubalulekile kweli icala. Oku kuyimfuneko ukuze akuncede kwi indlela wena ngenxa kufuneka uqhubeke incoko ngakumbi: Kwi, ke ngoko, thina kwimali indlela. Ukuba umphinda-phinde ngo enye yezigidi'. Ngaba ithemba glplanet ishishini lam.". Le ndlela isebenza kakuhle kwaye kancinci ngakumbi kwi, siza jonga le, into imibuzo unako kucelwa ye-young kubekho inkqubela.
Ke ngoko, umzimba wakho kufuneka phantsi osisigxina ulawulo
Le ndlela yeyona nto ibe luncedo kwabo, uyakwazi ukuyisebenzisa kuba iintlanganiso kwi-street, kuba i-intanethi dating. Ngoko ke, unga fumana, umzekelo, kwi-store. Idla elikhulu khetho ukuba indlela yakhe kwaye buza, kukufanela oku t-shirt okanye hayi. Okanye cela nje kuye ukugqiba oyikhethileyo.
Kwenu unako kanjalo cela uluvo, ukuba awuqinisekanga kwi-d-shop:"Ndithi, nisolko apha rhoqo khona.
Kuyinto elungileyo indebe ikofu.".
Oku eyona, eyona ilula kwaye ngexesha elinye kakhulu kunzima ye-dating indlela. Kubalulekile ngokwaneleyo ukuba zithungelana nge kubekho inkqubela. Ukwenza oku sebenzisa, ukuze nibe nokwazi kwakhe: bucala kwi imeko, usebenzisa yakhe uluvo humor okanye nkqu abanye yesebe eqokelelweyo izivakalisi.
Okokuqala, ukuba sifana isizathu ka-ukungaphumeleli ingaba manifestation yakho ukoyika.
Kuba oku, kuyimfuneko ukuba kuqhubeka educate yakho mna kwaye sebenzisa icebiso lam kwaye neendlela.
Khumbula, ukuba akukho mntu uza kukuxelela kakuhle njani ukufumana acquainted kunye kubekho inkqubela, kodwa ngabo consciously okanye unconsciously eliminates i-wimps, kwaye ukuba ukhe ubomi bakho ngoko nangoko emva, njengokuba yena contorted ubuso nisolko a wimp.
Musa ukukhutshwa kwazo ngokukhawuleza kwaye switsha yakhe yendalo ukhetho.
Yakho perseverance kufuneka dlala kuwe ngomhla isandla, kodwa akuvumelekanga: ukuba elonyuliweyo ngu frankly kuthumela kuwe, kutheni misela phezulu le abnormal. Ukuba yena ingaba ukuqonda tact, abo sele ube ujonge ukwenza ulwazi, unako ukwenza izinto ezintathu: Kwaye ngoku uyazi ngaphezu ngokwaneleyo malunga, ezifana kufuneka ahlangane. Yiloo nto ndiqinisekile yakho impumelelo kwi. Ukuqeqesha ngokwakho, kwaye constantly zama enjalo ke bonke ajongise ngaphandle. Wokuqala impression ukuba kufuneka umhlambi kwi nani-nkqu phambi young kubekho inkqubela, ndiya kuhlala yakhe wolwazi kwaye ukulandelela yakho iintlanganiso. Ulwazi - nanjengoko i-ikhasi, Ukususela yesikolo esiphakamileyo akunyanzelekanga ukuba ube nokuphumla umbuzo: njani inzala i kubekho inkqubela. Kwaye kutheni umntu ulandela ngokulula, Phambi, njani ukuba ahlangane a kubekho inkqubela kwi street yenza nabafana guy, ukuba umntu akayi walile. Yintoni ekufuneka uyenze. Kwaye ngoko ke, kufuneka kugqitywe ukusebenzisa zonke kuthetha ukuba kunokwenzeka kwaye fumana njani ukuba ahlangane a kubekho inkqubela kwi-intanethi kwaye alifumanisanga ayiphumelelanga inqaku, nto leyo iza sikunika impumelelo. Osikhangelayo, apho kubalulekile kungcono ufumane acquainted kunye beautiful girls.
Ndilungise kuba ufuna uluhlu eyona iindawo fumana.
Hambani nani apho baya fihla ladies eager ka-unxibelelwano Apho jonga. Kukho iindawo ezinjalo, namhlanje, uya ukufunda obaluleke kakhulu - njani ukwenza ifowuni inani kubekho inkqubela. Sele nolwazi isiseko. Indlela bathanda kubekho inkqubela ngubani kunoko. Kufuneka jonga appropriately, kuziphatha kanjalo. Eneneni, akunjalo nzima, njengoko kunokubonakala. I-elonyuliweyo ngaphezulu, Abanye kuthi, abanye ingxelo ukuba eyona imbi. Ndinixelela, ukuba lona ilungelo ndawo,ufuna buza ngaphandle kumhla nge beautiful kubekho inkqubela, kodwa asiyiyo yonke into kunokwenzeka ukufumana acquainted ngayo.
Ngoko ke, yintoni wena ulinde ujonge phambili.
Ezinzima budlelwane nabanye kuba abantu bonke iminyaka kwaye Unelson
을 충족 아랍에 사 미혼 이슬람교
free incoko ividiyo Dating ividiyo iincoko free ngaphandle ubhaliso ads exploring ukuphila umsinga guy ividiyo incoko- ubudala ividiyo Dating ividiyo ukuncokola nge-girls free ngaphandle izithintelo i-intanethi ividiyo incoko Dating ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko kuphila iwebhusayithi ividiyo Dating